Accueil > Gazetin'ny nosy > Vinan’ny filoha : Velirano efatra tsy misy tokontaniny
Vinan’ny filoha : Velirano efatra tsy misy tokontaniny
Efa tsy ampy roa taona intsony dia hifarana ny fe-potoam-piasan’ny filoha am-perinasa raha toa ka mbola hilatsaka ho fidiana izy amin’ny fifidianana filoham-pirenena manaraka. Ankehitriny anefa, raha jerena amin’ny maso tsy miangatra dia ny 4 amin’ireo velirano miisa 13 nampanantenain’i Andry Rajoelina no tsy misy tokontaniny na tsy hita mihintsy izay fivoarana na efa telo taona mahery aza no nitondrany ny firenena.
Tafiditra ao anatin’izany ny Velirano voalohany indrindra nataon’ny filoha tamin’ny fampielezan-kevitra, dia tsy inona izany fa ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Na teo aza ny fampitaovana ny Tafika sy ny pôlisim-pirenena, volana vitsy taorian’ny nahatongavan’i Andry Rajoelina teo amin’ny fitondrana, dia hita mibaribary aloha hatreto fa mbola tsy voafehy mihintsy ny tsy fandriampahalemana eto amin’ny firenena, indrindra fa ny any amin’ny tontolo ambanivohitra.
Velirano tsy misy tokontaniny koa mandrak’ity ny androany dia laharana faha-3 na ny ady amin’ny kolikoly sy ny fametrahana ny fitsarana ara-drariny. Ny rehetra angamba dia samy mahita sy mahatsikaritra avokoa fa mbola manjaka amin’ny sehatra rehetra ny kolikoly eto amintsika na inona na inona fepetra noraisin’ny governemanta. Na ny mpanao kolikoly aza moa dia mbola betsaka no tsy voakitikitika mihintsy na efa misy atontan-taratasy (dossier) mazava izao aza, raha tsy hiresaka afa-tsy i Rinah Rakotomanga tamin’ilay raharaha SMMC.
Torak’izany koa ny Velirano faha-6 dia ny famoronan’asa sy ny asa mendrika ho an’ny rehetra. Hatreto mantsy, mbola mipetraka ho olana lehibe eto amin’ny firenena ny tsy fananan’asa, tsy hita mivaingana mihintsy ny famoronan’asa nataon’ny fitondrana mijoro ankehitriny tao anatin’izay telo taona mahery izay. Mifanohitra tanteraka amin’izany Velirano izany ny zava-misy satria mitombo isa hatrany ny olona tsy an’asa eto amintsika, hany ka tsy mahagaga raha tsy resy mihintsy ny tsy fandriampahalemana eto amin’ny firenena.
Ny farany kosa dia ny velirano faha-9 izay mametraka ny fahaleovan-tena ara-tsakafo sy ny fampitomboana ny famokarana eto amintsika. Betsaka izay resaka nataon’ny fitondrana izay fa telo taona aty aoriana, mbola manafatra vary izay foto-tsakafon’ny Malagasy ny fanjakana, ary tsy hita taratra akory ny fitomboan’ny vokatra vokarina eran’ny Nosy.
Inty sy Nday
Jirama 67ha : Tratran’ny delestazy
Asa vaventy : Arirariran’ny Fanjakana ireo orinasa madinika
Patrick Rajoelina : Manala baraka ny malagasy
Famaizana ny mpitatitra : Miantso ny mpanjifa hanohitra ny tsy rariny
Hajo Andrianainarivelo : Mpihatsaravelatsihy